Safarkii Madaxweyne Farmaajo ee Qadar oo mar kale dib u dhacay – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASafarkii Madaxweyne Farmaajo ee Qadar oo mar kale dib u dhacay
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo wafddi uu hoggaaminayo ayaa la filayay in ay maanta u duulaan dalka Qadar iyada oo uu safarkaas dib u dhacay.
Safarkan waxaa uu qorshuhu ahaa in 13kii Bishan uu Madaxweynaha ku tago dalka Qadar hayeeshee waa uu baaqday,haddana waxaa uu qorshuhu ahaa in maanta oo ay Bishu tahay 18 uu tago dalkaasi hayeeshee mar labaad ayuu dib u dhacay.
Wafddiga Madaxweynaha waxaa ka mid ah lix Wasiir,Xildhibaanno iyo saraakiil kale oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya kuwaas oo la qorsheeyay in ay ka mid noqdaan xubnaha Madaxweynaha u raaci lahaa Dalka Qadar.
Baaqashada safarka Madaxweynaha waxaa sabab u ah khilaafka cusub ee u dhaxeeya Laamaha fulinta iyo xeer dejinta Dalka.
Khilaafka u dhaxeeya Guddoonka Golaha shacabka ee ay gadaal kla riixeyso Xukuumadda Soomaaliya ayaa hakad geliyay dhamaan shaqooyinkii Golaha shacabka waxaana ay xildhibaannada u kala jabeen labo Garab.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in markii ugu horreysay uu ka hadlo Khilaafka u dhaxeeya Guddoonka Golaha shacabka iyada oo la filayo in isku dayo xallinta khilaafka hadda ka dhexjira laamaha xeer dejinta iyo fulinta dowladda Soomaaliya.
D.Federaalka oo ka hadashay sababta ay ciidamada uga baxaan degaanna laga saaro Al-shabab
43,919 total views, 869 views today
43,919 total views, 869 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
43,991 total views, 869 views today
43,991 total views, 869 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
44,005 total views, 869 views today
44,005 total views, 869 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
44,027 total views, 869 views today
44,027 total views, 869 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
44,062 total views, 871 views today
44,062 total views, 871 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]